I-Airbus kunye ne-Air Lease Corporation Iphehlelele iNyanga yeNgxowa-mali eZizigidi ngezigidi zeedola
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Airbus kunye ne-Air Lease Corporation Iphehlelele iNyanga yeNgxowa-mali eZizigidi ngezigidi zeedola
I-Airbus kunye ne-Air Lease Corporation (ALC) isungula inyathelo lengxowa-mali ye-ESG yezigidi ngezigidi zeerandi eza kuba negalelo kutyalo-mali kwiiprojekthi zophuhliso lwezophapho oluzinzileyo eziya kuthi kwixesha elizayo zivulelwe abachaphazelekayo abaninzi abasuka kwingqeshiso yeenqwelo-moya nokuxhasa ngemali uluntu nangaphaya.
I-Air Lease Corporation ityikitye iLeta yeNjongo egubungela zonke iiNtsapho ze-Airbus, iqaqambisa amandla oluhlu olupheleleyo lwemveliso yenkampani. Isivumelwano se-25 A220-300s, 55 A321neos, 20 A321XLRs, i-A330neos ezine kwaye iquka ii-A350F ezisixhenxe. Umyalelo oza kuqukunjelwa kwiinyanga ezizayo, wenza i-ALC ese-Los Angeles ibe yenye yabathengi abakhulu be-Airbus kunye nomqeshisi ngeyona ncwadi iodolo inkulu ye-A220. Yasekwa kwi-2010, i-ALC iyalele ukuba i-airbus ye-496 iyonke ukuza kuthi ga ngoku.
“Esi sibhengezo socwangco sitsha sisiphelo seenyanga ezininzi zomsebenzi onzima kunye nokuzinikela kuyo yomibini le mibutho ukukhulisa nokulungisa kakuhle ubungakanani kunye nobungakanani bentengiselwano yenqwelomoya enkulu ngokujonga ukukhula ngokukhawuleza kwemfuno yenqwelomoya yehlabathi yokuphucula iinqwelomoya zabo nge-ALC. indawo yokuqeshisa,” utshilo uSteven F Udvar-Hazy, uSihlalo oLawulayo we-Air Lease Corporation. “Emva kodliwano-ndlebe olude noluneenkcukacha kunye neshumi elinesibini labathengi bethu beenqwelomoya abanobuchule kwihlabathi liphela, sijonge olu cwangco lubanzi kwezona ntlobo zinqwenelekayo nezifunwayo zenqwelo moya, eziquka i-A220, A321neo, A330neo kunye ne-A350 iintsapho. I-ALC yiNkokeli yeMarike yamazwe ngamazwe kuluhlu ngalunye kwezi ndidi zolona luhlu lwale mihla lwemveliso ye-Airbus. Olu longezelelo lweminyaka emininzi lwempahla yenqwelomoya entsha yetekhnoloji kwipotfoliyo eyandayo ye-ALC iya kusivumela ukuba sikhulise ingeniso yethu kunye nengeniso ngelixa sisanelisa iimfuno zabathengi bethu benqwelomoya.
Udvar-Hazy wongeze wathi: “I-ALC ibingumthengi wokuphehlelelwa kweenguqulelo ezidumileyo ze-A321LR kunye ne-XLR. Ngoku, siba ngumqeshisi wokuphehlelelwa kwe-A350F kwaye ngoyena mthengi mkhulu kakhulu we-A220. Sasinombono wokuba sibe ngabamkeli bokuqala be-A321 kwaye siqinisekile ukuba senze ukhetho olufanelekileyo kwakhona kwi-A220 kunye ne-A350F, sisabela kwinto esiyibonayo ukuba imarike iya kuyidinga kwixesha lokubuyisela kwangaphambili. Ukongeza, sinochulumanco kakhulu ukuba sibe nentsebenziswano kwingxowa-mali yozinzo eya kuba negalelo kwikamva lohlaza kushishino lwethu.”
Ngalo myalelo ubalulekileyo, sigxininisa ukuzithemba kwethu kungekuphela nje kwikamva elomeleleyo kunye nokukhula kothutho lomoya lwentengiso yehlabathi, kodwa kwimodeli yeshishini ye-ALC, kwizigqibo zethu zokuthenga iinqwelomoya ezikhethekileyo ezibandakanya, okokuqala, i-A350 Freighter entsha, kwaye ekugqibeleni. ngokombono wethu wexesha elide wokuba ukuodola iinqwelomoya ezintsha lolona tyalo-mali lwenkunzi yezabelo zethu,” utshilo uJohn Plueger, iCEO yeAir Lease Corporation kunye noMongameli. "Ngaphezu koko, thina kunye ne-Airbus sibhengeza inyathelo lokuqala elihlangeneyo le-ESG ekuthengeni iinqwelomoya ngokudala ingxowa-mali yezigidi zeerandi kwiiprojekthi zophuhliso lophapho oluzinzileyo olubaluleke kakhulu kwixesha elizayo".
“Esi sisibhengezo esikhulu se-Airbus ngo-2021. Umyalelo we-ALC ubonisa ukuba sihamba ngaphaya kwe-Covid doldrums. Ngokubona kwangaphambili, i-ALC iqinisa ipotifoliyo yomyalelo wezona ntlobo zeenqwelomoya ezinqwenelekayo njengoko siphuma kwintlekele kwaye ngokukodwa, ibone ixabiso eloyikekayo eliziswa yi-A350F kwimarike yempahla. Uqinisekiso lwe-ALC luqinisekisa umdlandla wehlabathi esiwubonayo wokutsiba kwequantum kwindawo yothutho kwaye sikuqhwabela izandla ukuqonda kwayo ekuyikhetheni nasekubetheni wonke umntu ukuya entanjeni yesibhengezo somyalelo wokuqala we-A350F. Ukongeza, sivumile ukwenza umbono wethu wokuhamba ngenqwelomoya ozinzileyo ube yinxalenye yesi sivumelwano eyona nto iphambili kuthi sobabini,” utshilo uChristian Scherer, iGosa eliyiNtloko lezoRhwebo kunye neNtloko ye-Airbus International.
I-A220 kuphela kwenjongo yenqwelo-moya eyakhelwe ukuthengisa izitulo ze-100-150 inikezela nge-25% eyongayo yefuthe elingcono* kunye nokukhululeka komkhweli kwinqwelo-moya enendlela enye. I-A321 Family ebandakanya inguqulo ye-XLR ukuya kuthi ga kwi-4,700nm ubude kunye ne-30% yokusetyenziswa kwamafutha aphantsi * kudityaniswe ne-A330neo ngamaqabane afanelekileyo kwinto ebizwa ngokuba yimbindi yecandelo lemarike. I-A350F, esekwe kweyona nkokeli yehlabathi yanamhlanje kuluhlu olude elungiselelwe imisebenzi yomthwalo enikezela ubuncinci ngama-20% wokutshiswa kwepetroli ephantsi kunokhuphiswano kunye nenqwelomoya yesizukulwana esitsha kuphela elungele imigangatho yokukhutshwa kwe-ICAO CO2027 ka-2.
*kwisizukulwana sangaphambili seenqwelomoya ezikhuphisanayo